Sora-pandraisana singa - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Taorian'ny niasa mafy nandritra ny taona maro, PCBfuture dia namolavola fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo mpaninjara singa malaza eran-tany, izay nahafahanay nahazo ireo singa avo lenta avy amin'ireo mpamatsy sy mpanamboatra nahazo alàlana. Ankehitriny, PCBfuture dia manana injenieran'ny famarotana matihanina 18 ary namolavola fomba fikajiana voarindra sy marina indrindra ho an'ny singa elektronika. Ny sanganasa rehetra dia manampy anay hanafohezana ny rojom-panomezana sy hividy ireo faritra tany am-boalohany amin'ny vidiny mirary indrindra. Ankoatr'izay, ny fotoana nitarihan'ny PCB Assembly BOM anay dia mety ho haingana 24 ora.
Ireo singa elektronika avo lenta
Fantatry ny PCBfuture hatrany fa ny kalitao no zava-dehibe amin'ny mpanjifa, ary ny singa no antony lehibe mahatonga ny tabilao elektronika hiasa lava na tsia. Hatramin'izay dia manangana fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo mpamatsy singa manana alalana sy malaza izahay, ao anatin'izany ny Arrow Electronics, Mouser, Avnet, Digi-key, Farnell, Future Electronics, sns. ny trano fanatobiana entana.
Prototype sy Sourcing an'ireo singa madinidinika
Fantatsika rehetra fa ny singa elektronika dia ny ampahany lehibe amin'ny serivisy fivoriambe PCB turnkey ary mila herin-kery sy loharano ary fotoana hanaovana izany koa izy. Raha ampitahaina amin'ny fivoriana pcb Volume, ny fivoriambe pcb Prototype dia tsy ho ara-toekarena ho an'ny injeniera sy mpamolavola. PCBfuture dia namorona fomba fividianana mahomby mahatonga antsika afaka manome sy manonona haingana ireo faritra takiana. Miantehitra amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny ekipa, afaka manonona haingana ny BOM isika, na inona na inona prototype na volavolan-dalàna. Izy io koa dia afaka manampy antsika hahita ireo singa sarotra harahina ihany koa.
Isan-taona, PCBfuture mividy singa marobe amin'ireo mpaninjara sy mpamokatra singa fanta-daza. Fividianana vola be dia be mamela antsika hahazo vidiny ambany dia ambany amin'izy ireo. Izany dia manampy anay hampihena ny vidinay izay ahafahanay mampita ny tombotsoan'ny mpanjifanay. Ny baiko amin'ny fivoriambe PCB an'ny turnkey malalaka dia mampihena ny filàna fitahirizana entana fanampiny ho an'ireo singa elektronika ho anay.
Ny tanjonay voalohany dia ny hahatonga ny PCB Manufacturing, Components Sourcing ary fivoriambe elektronika ho asanay, ary avelao ny mpanjifantsika hifantoka amin'ny teknika elektronika sy ny endrika.
Mba hahazoana tombana amin'ny vidin'ny PCB Assembly amin'ny tetik'asa ho avy dia alefaso azafady ny fangatahanao serivisy @ pcbfuture.com.